Cudurka Kanserka & Doorka Wasaaradda Caafimaadka • Horseed Media
You are here: Home / Opinion / Cudurka Kanserka & Doorka Wasaaradda Caafimaadka
March 24, 2018 - By: Abdirahman Abdi
Cudurka Kanserka sida lawada ogyahay waa dilaa halis ah, gumaad ba’ana ku haya dadka, walise aan la shaacin dawadiisa dhabta ah marka laga yimaado daawooyin kaalmaati ah. dhawaanahaan gaar ahaan shantii sano ee u danbeysay waxaa soo badanaya dadka da’da yar ee cudurkani galaafanayo, ilaa haddana sababta uu la soo badanayo cudurkan cid baaritaan ku samaysay ma arag mana maqal wacyi gelin guud ee dadka loo samaynayo.
Haddaba sida aan wada ognahay dadka iyo dalkaba waxaa masuul ka ah Dawlad haba iska tabar yaraato, dhaqaale xumana ha jirto. Waxyaalaha dawlad marka la maqlo laga filayo waxaa kamid ah inay dadkeeda xanaanayso, cadawga ka ilaaliso, maslaxada guud ee dadka ay matashana marwalba kor uqaado kana fakarto.
Haddaba Dawlada Puntland, waxay leedahay Wasaarad Caafimaad, Waxbarasho Ganacsi, iyo kuwa kale oo badan, mid walbana shaqooyin gaar ah ayay masuuliyad ka saaran tahay.
Haddaba Rabi wuxuu noo sheegay in aan aduunkamuddoyar oo kooban joogayno, inta aan ku suganahayaduunkana aan imtixaan ku jirno, marka qofka la oofsadana la waydiin doono wax walba uu soo qabtayinta uu aduunkajoogay. sidoo kale Rabi wuxuu yiri qof walba masuuliyad baa saaran, masuuliyadaasnamaalinka aakhiro waa lawaydiin doono. Haddaba masuuliyiinta dawlada gaar ahaan Wasaarada Caafimaadka waxay nooguxilsaaran yihiin caafimaakda bulshada, waxaanaoganahay in Cisbitaalada Guud ee Garowe, Galkacyo, Bosaaso iyo gobolada kale ay yihiin ay noqdeenbohologaleen aan daawofiicanoolin, agab caafimaadka wax deeqshisheeye lagu keenayma’ahaneinaysan wax wayn ku soo kordhin, guud ahaan bulshada caafimaadkeediina ay warmoog ka yihiin, taas waxaa daliil u ah:-
Waxaan oganahy in dhawr jeer Cisbitaalka guud ee Galkacyo iyo Garowe shacabku u qaaraameen si loo qalabeeyomarkii wax wax ka qabtala’waayay.
In dadwaynahaqofkiixanuusandadhaqaalanahaysta uu caafimaad u ahaadoHindiya, Ethopia, Kenya, Turkey iyo meelo kale.
Ciddi dhaqaale dibada ay ku aadowaydana, ugu yaraanHargaysa ama Xamar ay naftakulacararaan.
Haddaba, arrimahaas oo dhan marka laga soo takoarrintaqoraalkandulucdiisa ah ayaa waxay tahay war umaddi waxaa gumaad ku haya cudurkaKanser-ka ee umadda halooga gurmado. Waanogahay inuusan daawolahayn in la yiraahdo, balse waxaan ubaahanahay in la baarowaxadhabta ah ee sababaya iyo noocyadda gaarka ah ee umadda kusoo badanaya, kadibna bulshada laga wacyigeliyowaxakeenaya ama xitaakeenikarahaddaanwaxa kale loo awoodin.
Arrintaas waxaa lagu gaari karaa in khuburocaafimaad la maalgeliyo oo ay baaritaan sax ah ku sameeyaanwaxakeenayacudurkaan dhawaanahaan inawaalay ee dhalinyaradii, odayaashii, Saqiirki aan midnareebayn.
Haddaan u imaado Dhanka WasaaradaWaxbarashada iyo Ganacsiga. Waxaan oganahaywadan kasta wuxuu ku tashto waa dhalinyaradiisa gaar ahaan kuwoodaaqoonta leh, aqoontanawaxtarkeedu wuxuu ku xiran yahay tayadeedda. Wadankii wuxuu wada noqdayJaamcad, Machad Caafimaad, iyo Iskuul aan tayolahayn. War arrintaas wax kaqabta oo masuuliyaddaidin saaran Rabi hortiisa waa la idinwaydiinayaa ee kasoo dhalaala.
Wasaarada Ganacsiga waxay ka mid tahay meelaha masuuliyad wayni ka saaran tahay, horumarinta iyo ilaalinta Ganacsiga dalka. Waxaan oganahy in shirkado badan ay soo galiyaanwadankacunno, sharaab iyo badeecoyin kale oo dadka caafimaadkooda halis ku ah, arrintaas wax ka qabtama’ahan wax la idinkabaryayo ee waa waajibidin saaran oo la idinxasuusinayo. Ganacsade waa shilindoon, in yar mark laga reebo,intooda badan wax kasta oo dhaqaale leh inay keenaanuu hadafkoodu yahay balse aan u aabeyeelayn wixii wax udhimaya caafimaadka bulshada, arrintaasna waxaa wax looga qaban karaa talaabodawladeed ee arrintaas u istaag.
Gunaanad, Haddaba arrimahakor ku xusan Caafimaadka, Waxbarashada iyo Ganacsiga waxay muhiim u yihiin jiritaankadadkeena ee yaan la sahlan oo laga aamusinmaxaa yeelay caafimaadxumobulsho ma jirikarto, waxbarasho tayoxunkuma horumarin karno, Ganacsi aan caafimaadkeena wax udhimayn waxaan ka helaynaashaqoabuur iyo fakhriga oo yaraadda.
Qoraa: Ustaad Sharmarke Abdullahi Ali